Banyere Anyị - FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd.
FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd. ka hiwere na 2013 ma dị na Quanzhou, mpaghara FuJian, na-ekpuchi mpaghara 9600 square square ma nwee ihe karịrị 300 ndị ọrụ. Anyị bụ otu n'ime ndị na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ndị ọkachamara bụ ndị ọkachamara na akpụkpọ ụkwụ nkịtị, egwuregwu egwuregwu nwere ụdị ejiji maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka. Anyị nwere akụrụngwa mmepụta dị elu, ikike R&D nọọrọ onwe ya na otu QC siri ike. Nwere mmekọrịta ogologo oge na ọtụtụ ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ ụwa niile. Dsdị ama ama ndị anyị rụkọtara ọnụ dị ka FILA, US POLO, PIERRE CARDIN, AUSTRILIAN, KAPPA, AIRWALK, DUCATI, CHAMPION, UMBRO, wdg
Anyị na-anabata iwu OEM ma nwee ike ịme nlele n'efu dịka ihe ndị chọrọ ịzụ si dị. A na-arụpụta akpụkpọ ụkwụ anyị niile dị ka ọkọlọtọ America na Europe siri dị. Anyị agbasoro ụkpụrụ nke ịnye akpụkpọ ụkwụ kachasị mma kachasị mma site na ịhọrọ ezigbo ngwaọrụ dị mma na usoro mmepụta nke ọkọlọtọ na teknụzụ nwere ahụmịhe zuru oke n'okpuru usoro mmesi obi ike zuru oke. Anyị nwere ike mee ka obi sie gị ike na ịdị mma, ọnụahịa asọmpi, ọrụ dị mma na nnyefe ngwa ngwa na nha anya na nha anya! Anyị na-anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi iji kpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmahịa n'ọdịnihu na ịmekọrịta ibe!
Houselọ nkwakọba ihe ruru ihe
Warelọ nkwakọba mbufe
Warelọ nkwakọ ngwaahịa
Chepụta ma mee sampleti n’efu dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Can nwere ike ikpebi akara, agba, ụkpụrụ, ihe na wdg. Onye ọrụ anyị nke na-ahụ maka ọrụ na ndị mmepe ga-ekwupụta echiche gị. Anyị na-azụlite ihe ọhụụ kwa ọnwa maka onye ahịa anyị ịhọrọ iji hụ na anyị na-edebe usoro ọrịre ọhụụ na - ere ọkụ.And nwere ike ịhọrọ ụdị ị nwere mmasị na ụdị dị ugbu a. Oge nlele oge ndu gị bụ ihe dị ka ụbọchị 7-15.
Mee mmepụta dika gosiputara n’omume na ihe ndi ozo ndi ozo choro. Anyị nwere ọkọlọtọ siri ike na akụrụngwa ga-aga n'ihu karịa nyocha ugboro isii n'oge emeputa ọtụtụ niile iji hụ na akpụkpọ ụkwụ niile jikọtara ya nke ọma na ezigbo mma. Obi dịkwa anyị ụtọ na anyị na ndị ahịa na-eme nnyocha nyocha nke mkpa ndị ahịa na ime akpụkpọ ụkwụ nke ndị ahịa chọrọ. Oge izizi izizi anyị na - abụ ụbọchị 35-60.
Vesselgbọ akwụkwọ akwụkwọ ya na onye ọzọ a họpụtara edetu ma ọ bụ onye ọrụ anyị gwara anyị izu 2 ka izu atọ ga-abanye tupu ebubata ya na mbu. Tupu anyị eburu akpa anyị n’ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-enyocha akpa ahụ iji hụ na ọ dị ọcha ma kpọọ nkụ. Ma jiri nlezianya na-ebugharị katọn. Nyefee akwụkwọ niile dị ndị ahịa mkpa n'ụzọ ziri ezi ma na-ekwupụta nke ọma.
Branfọdụ aha ndị anyị rụzuru